တံခါး, တံခါးဆွဲယူဆေးရုံမှာ Automatic, ဆေးရုံတရုတ်ထုတ်လုပ်သူ မှစ. Glass ကိုတံခါးဆွဲယူပွတ်ဆွဲကူးပြောင်းမှုကမ်းလှမ်းမှုကိုဆေးရုံ
Home > ထုတ်ကုန်များ > အလိုအလျောက်ဆွဲယူတံခါး > တံခါးဆွဲယူဆေးရုံ
တံခါးဆွဲယူဆေးရုံ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, တံခါးဆွဲယူဆေးရုံ, ဆေးရုံအလိုအလျောက်တံခါးဆွဲယူ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Glass ကိုတံခါးဆွဲယူဆေးရုံ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
သံမဏိမြန်နှုန်းမြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းတံခါး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လျင်မြန်စွာအရေးယူအရည်အသွေးမြင့်ဆေးရုံလျှောတံခါးကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြန်နှုန်းမြင့်အော်တိုဆေးရုံလျှောတံခါး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အရည်အသွေးမြင့်စစ်ဆင်ရေးအခန်းအလိုအလျောက်တံခါးလျှော  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အရည်အသွေးမြင့်ဆေးရုံခွဲစိတ်ခန်းတံခါး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လျင်မြန်စွာအရေးယူဆေးရုံလျှောတံခါးကို insulated  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်ရုံဈေးဆေးရုံလျှောတံခါး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အရည်အသွေးမြင့်ဆေးရုံလျှောတံခါး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆေးရုံအမြန်အရေးယူအလိုအလျောက်တံခါးကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အရည်အသွေးမြင့်စစ်ဆင်ရေးအခန်းလျှောတံခါး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လျှပ်စစ်ဆေးရုံလျှောတံခါးကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလိုအလျောက်ဆေးရုံလျှောတံခါး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သံမဏိဆေးရုံလျှောတံခါး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆေးရုံအလိုအလျောက်လူပျိုတံခါးဆွဲယူ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တံခါးဆွဲယူဆေးရုံအလိုအလျောက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုံစစ်ဆင်ရေး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆေးရုံအလိုအလျောက်တံခါးဆွဲယူ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလိုအလျောက်လုံဆေးရုံစစ်ဆင်ရေးတံခါးဖွင့်ဆွဲယူ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သံမဏိ Air ကိုနေရာမှာလည်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆွဲယူတံခါး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုံဆေးရုံစစ်ဆင်ရေးတံခါးဆွဲယူ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တံခါးဆွဲယူသံမဏိ Air ကိုနေရာမှာလည်းဆေးရုံ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သံမဏိ Air ကိုနေရာမှာလည်းပြည်ထဲရေးဆေးရုံတံခါး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 500 / Set/Sets
သံမဏိ Air ကိုနေရာမှာလည်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆွဲယူတံခါး အဆိုပါဆေးဘက်ဆေးရုံအော်တိုတံခါးကိုယေဘုယျအားဖြင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်တဲ့အခန်းဒါမှမဟုတ်ဆေးရုံအိပ်ရာ၏အတွင်းနှင့်ထွက်တွန်းဖို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအတွက်ပြန်လည်သက်သာလာခြင်းရပ်ကွက်တွင်တပ်ဆင်သောတံခါးကိုဖြစ်ပါတယ်။...
သံမဏိ Air ကိုနေရာမှာလည်းပြည်ထဲရေးဆေးရုံတံခါး အဆိုပါဆေးဘက်ဆေးရုံအော်တိုတံခါးကိုယေဘုယျအားဖြင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်တဲ့အခန်းဒါမှမဟုတ်ဆေးရုံအိပ်ရာ၏အတွင်းနှင့်ထွက်တွန်းဖို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအတွက်ပြန်လည်သက်သာလာခြင်းရပ်ကွက်တွင်တပ်ဆင်သောတံခါးကိုဖြစ်ပါတယ်။...
တရုတ်နိုင်ငံ တံခါးဆွဲယူဆေးရုံ ပေးသွင်း
တံခါးကို panel က: တံခါးကို panel ကိုအဘယ်သူမျှမဘောင်နှင့်အတူသံမဏိ 304 ၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ core ပစ္စည်းများစက္ကူပျားလပို့, လူမီနီယံပျားလပို့, PU, ​​EPS နှင့်စသည်တို့ကိုတံခါးကိုသော့ခတ်၏ installation ကိုက်ဘ်ဆိုက်များဖြစ်ကြသည်တံခါးကိုနီးကပ်လာခြင်းနှင့်ပတ္တာအထူးနည်းပညာအားဖြင့်ပုံသွင်းတဲ့ compression နေသောပိုပြီး than1.5mmthickness ၏စတုရန်းပြွန်နှင့်အတူအားဖြည့်နေကြသည်။
တံခါးကိုဘောင်: က wallboards နှင့်အတူအဆိုပါဆက်သွယ်မှုအမျိုးအစားများ 304. လုံးဝသံမဏိ၏ဖန်ဆင်းထားသည်ကို double-ကလစ်အမျိုးအစားနှင့်လူမီနီယံကွန်နက်ရှင်ဖြစ်ကြသည်။ ယခင်အများအားဖြင့်စက်ကိုဖန်ဆင်း wallboard အသုံးချနေသည်နှင့်အဆုံးစွန်သောလက် wallboard ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အဆိုပါပစ္စည်းများနှစ်ဆပြတင်းပေါက်ဖြစ်ကြပြီး type ကိုသိမ်းကျုံး bar ကိုရုတ်သိမ်းပေးရန်။ သော့ခတ်ကျော်ကြားတံခါးကိုသော့ခတ်နိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ်ပိုင်ရှင်တွေသော့ခတ်တံဆိပ်သူတို့ကိုယ်သူတို့ရွေးနိုင်သည်။
specification: 800X2100, 900X2100, 1500X2100 or1800X2100, လိုအပ်ချက်များကို customers` မှစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်ဘုံအရွယ်အစား, ထိုပစ္စည်းများသည်အခြားအထူးပစ္စည်းများ as306Lor ထိုကဲ့သို့သော customers` လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီရွေးချယ်ထားသည့်နိုင်ပါသည်။
အင်္ဂါရပ်များ: ငါတို့သည်ကြော့အသွင်အပြင်, ကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်တာရှည်ခံ, အက်ဆစ်နှင့်ပုပ်ခုခံနှင့်အပူလျှပ်ကာတို့သည်အထုတ်လုပ်သံမဏိ 304 တံခါးကို။ ဒါဟာ anticorrosion နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအီလက်ထရွန်းနစ်စက်ရုံမှနှင့်အစားအစာစက်ရုံအဖြစ်အရည်အသွေးမြင့်မားများအတွက်လိုအပ်သည်နိုင်ငံခြားရေးရာကိုရည်မှတ်နေအိမ်နှင့်အင်ဂျင်နီယာမှာ High-end စီမံကိန်းများအတွက်ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်
တံခါးဆွဲယူဆေးရုံ ဆေးရုံအလိုအလျောက်တံခါးဆွဲယူ Glass ကိုတံခါးဆွဲယူဆေးရုံ ရပ်ကွက်တံခါးဆွဲယူဆေးရုံ တံခါးအလိုအလျောက်